सरकारी उपलब्धिमा न रहेगा बाँस, न बजेगा बाँसुरी
मुख्य पृष्ठकन्टिर-दृष्टिसरकारी उपलब्धिमा न रहेगा बाँस, न बजेगा बाँसुरी
मङ्गलबार, ०४ फागुन, २०७७ 0प्रतिक्रिया
कन्टिर–बाबू यस कुरामा सहमत छन् कि ओल्बा बोल्नमा बहुत तेज तर्रार छन् । उनले बडे–बडेको बोल्ती बन्द गरिदिन सक्छन् । उखान–टुक्का, किंवदन्ती, शब्दको जोड–घटाउ आदिका माध्यमबाट भरमार भाष्य निर्माण गर्न उनी खप्पिस छन् ।
हालसालकै कुरा गरौँ । ओल्बाले सरकारले तीन वर्ष पूरा गरेको सन्दर्भ भन्दै सिंहदरबारमा ठूलो जलसा आयोजना गरे । जलसामा ओल्बाले यति गजब–गजबका दाबी प्रस्तुत गरे कि त्यसको भिडियो हरेर कन्टिर–बाबू हाँस्दा–हाँस्दै लोटपोट भइगए ।
२०७२ को भूकम्पमा थरथराएको प्रधानमन्त्री कार्यालय पाँच वर्ष लाएर मरम्मत गरियो र यो कार्यालयको फेरि उद्घाटन गरियो । उद्घाटन गरे हाम्रा ओल्बाले ।
ओल्बाले उद्घाटन गरेमात्रै सिंहदरबारको कार्यालय प्रयोग चाहिँ गरेनन् । बरु बालुवाटारमा नयाँ सिंहदरबार बनाइदिए, जसलाई ओल्बाले आफ्नो कार्यकालको महान् उपलब्धि–सूचीमा दर्ता गराएका छन् । वाकपटु जो छन् हाम्रा ओल्बा ।
यो त एउटा उदाहरणमात्र हो । कन्टिर–बाबू सम्झन्छन्, यस्ता आलोचनायोग्य अनेक कुरा छन्, जो ओल्बाले सरकारको उपलब्धि मानेका रहेछन् । सरकारले तीन वर्ष पूरा गरेको दिन यिनले के–के भने के–के ? सुन्दा–सुन्दा कन्टिर–बाबूको कानै पाक्यो ।
केही दिनअघि टोरामाले लोडसेडिङ घिसिङले होइन आफूले गर्दा हटेको भन्ने दाबी गरेका थिए । त्यही नकच्चरो दाबी–शृङ्खलामा जोडिँदै हाम्रा ओल्बाले पनि सरकारले गरेका काम गनाउने क्रममा लोडसेडिङ आफूले हटाएको ठोकुवा गरे । कति हाँस्नु ! लोडसेडिङ होइन ओल्बाले घिसिङलाई चाहिँ न रहेगा बाँस न बजेगा बाँसुरी बनाएको कसलाई थाहा छैन ?
कन्टिर–बाबूका अनुसार सरकारका उपलब्धि सुनाउने क्रममा ओल्बाले समेट्नुपर्ने धेरै कुराचाहिँ छुटाए । जयनगरनजिक इनरवा गाउँमा त्रिपाल ओढाएर राखिएको रेलको कुरा गरेनन् । त्रिपालभित्र मुसा घुसेर रेलको केही सिट र तार काटिसकेको कुरा पनि गरेनन् । ओल्बाको छोरा भएको दाबी गर्ने रेल्वेका गुरुका बारेमा पनि कुनै चर्चा गरेनन् ।
ओल्बाले सरकारको उपलब्धि सूचीमा नेपाली झन्डा हल्लाउने पानीजहाजको चर्चा गरेको पनि कन्टिर–बाबूले सुनेनन् । पानीजहाज चलाउने नाममा पछुवाहरू भर्ती गर्न खोलिएको कार्यालय र तलबी कर्मचारीका बारेमा उनले एक शब्द बोलेनन् ।
आश्चर्य सधैँ प्राथमिकतामा चर्चा गरिने मेलम्चीको म पनि उच्चारण गरेनन् यसपटक ओल्बाले । अरे हाँ, घरघरमा ग्यास पुर्‍याउने, सबै तुइन हटाउने जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको उल्लेख पनि सरकारको उपलब्धि सूचीमा देखेनन् कन्टिर–बाबूले ।
कहिलेकाहीँ कन्टिर–बाबूको मथ्था भसियाइहाल्छ, दिमागमा कुरा घुस्दैन । ओल्बाको एउटा कुरा कन्टिर–बाबूले जति बुझ्न खोजे पनि बुझ्दै बुझेनन् । एकातिर ओल्बा उनको नेतृत्वमा तीन वर्षमा यति काम भयो कि सरकारको काम देखेर संसार चकित छन्, साथीहरूले त्यसैको डाहा गरेको हो भन्छन् । अर्काेतिर यो सरकारले कामै गर्न पाएन भनेर रुवाबासी पनि गर्छन् ।
अरे यार, यी दुवै कुराको तालमेल कसरी मिल्छ ? उनले जब कामै गर्न पाएनन् भने त्यत्रो उपलब्धिको फेहरिस्त कसरी तयार भयो ? के मान्नु, के नमान्नु ? ओल्बाले कुन ढाँटेका कुन्, कुन ढाँटेका होइनन् ? कि दुवै ढाँटेका हुन् ? कन्टिर–बाबू बडो असमन्जसमा छन् ।
उपलब्धि फेहरिस्त रुवाबासी